Umhlobo Wenene FM Indaba / news bulletins · SABC News and Current Affairs - iono.fm
Umhlobo Wenene FM Indaba / news bulletins
SABC NEWS AND CURRENT AFFAIRS | Podcast , ±5 min episodes every 18 hours	|
Igxothiwe emsebenzini inqununu yesikolo esiseMpuma Koloni eyanyanzela umfundi ukuba angene kumngxuma wendlu yangasese ukuze akhuphe umnxeba wayo ophathwayo (CELLPHONE) nowatshona kwilindle.
Zohlukile iimbono zeengcali mayela nokuba kufanel' ukuba kumiselwe imiqathango engqingqwa kusini na kwiphondo iGauteng ukunqanda ukunwenwa kwentsholongwane icorona.
Sixhalabile isixeko saseTshwane ngenxa yokuntingela phezulu kwamanani abantu abosulelwa yintsholongwane icorona.
Bazakuvela enkundleni namhlanje abarhanelwa abane ngokunxulumene nokufunyanwa kwabo beneziyobisi ezixabisa i400 million yeerandi.
Umphathiswa wamashishini karhulumente uPravin Gordhan uthi kutyikitywe isivumelwano phakathi kukarhulumente nehlakani elitsha lika SAA iTakatso. UGordhan uthi kuzakutyikitywa isivumelwano sentengo ngaphambi kokuba kusekwe ngokusesikweni uSAA omtsha. ITakatso izakulawula u51 percent wezabelo kweli qumrhu lezophapho lihlengahlengisiweyo, ngelixa urhulumente ezakulawula u49 percrnt wezabelo. ITakatso izakutyal' imali engaphezulu kwe-3 billion yeerandi kwaSAA.
Iqumrhu loosomashishini iTakatso Consortiun ibhengezwe njengehlakani lenkampani yezophapho kweli iSAA.
Olu qhogwano lukarhulumente nenkampani yabucala lubeka amashumi amahlanu nanye ekhulwini (51 pesent) yezabelo kule nkampani ezandleni zale ndibanisela yoosomashishini babucala.
Umphathiswa wezobulungisa neenkonzo zoluleko uRonald Lamola uthi i-United Arab Emirates ayisebenzisani noMzantsi Afrika, njengoko kwakuvunyelwene ngala mazwe mabini. U-Lamola ebethetha neentatheli ngale ntsasa, emva kokuba igunyabantu lezotshutshiso kuzwelonke licele uncedo kwi Interpol ukuze usapho lakwa Gupta lubuyiselwe kweli loMzantsi Afrika, lujongane namatyala orhwaphilizo, ubuqhophololo, nokugudis'imali eze ngondlela-mnyama.
Iziko lezifo ezosulelayo i-NICD ngamafutshane lithi sithetha nje ngabantu abayi seven-thousand-300 abanyangelwa icovid19 kwizibhedlele zeli lizwe, kwaye kuthwa izolo bayi 844 abantu abangeniswe kumaziko empilo. Abantu abasondele ku 5-thousand kwabo bafumana unyango abakwii ward zabagula kakhulu, bakwizibhedlele zabucala.
Ujaji Piet Koen ucele amagqwetha obesakuba ngumongameli weli uJacob Zuma ukuba athobele imiqathango yenkundla phambi kokuphula-phulwa ngokusemthethweni kwesicelo esikhethekileyo ngomhla we-19 kuJuly.
Igunya bantu lotshutshiso iNPA lithi alikafaki maxwebhu aphendula kwisicelo esikhethekileyo seqela lamagqwetha lobesakuba ngumongameli weli esifuna athi gu bucala umtshutshisi u-advocate Billy Downer.
Umphathiswa wesebe lezempilo kuzwelonke uGqirha Zweli Mkhize uthi uphando kwizityholo zokukhutshwa ngokungafanelekanga kwesiniki maxabiso sezigidi ngezigidi zerandi lufumanise ukuba yayingahambisani nomthetho intsebenziswano yelisebe kunye nenkampani yonxibelelwano iDigital Vibes.
Usekela sosiba jikelele weANC uJessie Duarte uthi zange kwenzeka ngaphambili ukuba ilungu eliphezulu lombutho elifana nososiba jikelele uAce Magashule lingafuni ukuthobela imithetho yombutho.
7 Dec Efficient Group Services, Economist Dawie Roodt
17 Dec SBU NDEBELE APPEARS IN DBN COMMERCIAL CRIMES COURT
18 Nov 18 NOVEMBER 2015 6AM
17 Dec DA ANNOUNCES MAYORAL CANDIDATES IN KZN
19 Nov 19 NOVEMBER 2015 7AM
22 Jun No playoffs, our matter is at the SCA: Royal AM CEO Sinky Mnisi
27 Oct 27 OCTOBER 2015 8AM
17 Dec LUCKY LADS (AND LASSES) TRAIN WITH LIVERPOOL IN DURBAN